विचार/ब्लग Archives - KhabarKhurak
आफैंलाई जितेका ….बहादुर…. ओली
अरस्तुले भनेका छन्, ‘म त्यसलाई बहादुर मान्छु जसले आफैंलाई जित्न सक्छ, तर त्यसलाई हैन जसले शत्रुलाई जित्छ।’ यो भनाइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जीवनसँग मेल खान्छ। अर्थात् अरस्तुको भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वास्तविक बहादुर हुन्। किनभने उनले पटक–पटक आफूलाई जितेका छन्। ओली बाल्यकालदेखि नै […]
३० मंसिर २०७६, सोमबार १३:५२
धानमन्त्री केपी ओलीको ‘नयाँ युग’ सुरु गर्ने मनोकांक्षासँगै सरकारी तामझाम अनि हर्ष बढाईंका साथ घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले पहिलो वर्षगाँठ मनाएको छ। रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरूलाई अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानसहित सुरु गरिएको कोषमा हालसम्म सूचीकृत हुने रोजगारदाता ११ हजार ७८५ पुगेका छन्। कोषको वेबसाइटमा राखिएको अध्यावधिक सूचनाअनुसार कोषमा आवद्ध योगदानकर्ता अर्थात् श्रमिक÷कर्मचारी १ लाख ३० […]
२८ मंसिर २०७६, शनिबार १५:२५
राजधानीमा नै भोगेको छाउपडी पीडा
विश्वमा पहिलोपटक नेपालमा मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइरहँदा अनि लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान चलिरहँदा महिनावारीबारेको अनुभव साट्न मन लाग्यो। भर्खरै अछाममा २१ वर्षीया पार्वती राउतको छाउपडी गोठमा भएको मृत्युले स्तब्ध बनायो। किन राष्ट्रले अपराध ठानेको यो प्रथालाई हटाउन अझै नसकिएको होला ? महिलाभित्र हुने प्राकृतिक प्रक्रियालाई अछूतो बनाउने काम हाम्रो समाज र संस्कारले गरिरहेको छ। यही […]
२८ मंसिर २०७६, शनिबार १५:२०
आज हामी (मदनकृष्ण दाइ र म) जुन अवस्थामा छौं, यो सबै नेपाली दर्शकले दिएका मायाले नै हो। यहाँसम्म आइपुग्छौं भनी मैले कहिल्यै सोचेको पनि थिइनँ। अनि नेपालको कलाकारिता क्षेत्रमा म यति माथि पुग्न सक्छु र यसलाई पेसा बनाउँछु भन्ने त झन् कल्पनै गरेको थिइनँ। मैले बुझेको एउटा कुरा के हो भने भाग्य र कर्ममा अलिकति […]
जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाउन सक्छु
संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका सबै माननीय सदस्य सभामुख बन्ने समान हैसियतमा छन् । अहिले यो व्यक्ति बन्न हुने, त्यो बन्न नहुने भन्न मिल्दैन । मेरो हकमा भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई वर्ष उपसभामुखकौ हैसियतमा कार्यरत छु । यो मेरा लागि अनुभव र सिकाइ दुईवटै महत्वपूर्ण छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट फरक दलकै रुपमा उपसभामुख […]
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार १०:५२
उच्च ओहोदाका मानिसले नै महिलामाथि हिंसा गरेका छन्’
काठमाडौँ, २६ मङ्सिर । महिला हिंसाका घटना जताततै छन् । भौगोलिक रुपमा हिमालभन्दा पहाडमा धेरै, पहाडमा भन्दा तराईमा धेरै महिला हिंसाका घटना देखिन्छन् । नेपाली समाजको विविधताभित्र हेर्ने हो भने आर्य समुदायमा महिला हिंसाका घटना धेरै छन् । आर्यमा पनि गरिब, दलित र शिक्षा तथा चेतनाको पहुँचभन्दा पर रहेका समुदायमा महिला हिंसाका घटना धेरै देखिन्छन् […]
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार १०:५०
मोदी सँग बात गरून्, भरपर्दो साथ खोजून् !
आलोचक र प्रशंसकबाटसमेत आराम गर्ने सल्लाह पाइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झनै सक्रिय भैरहनुभएको छ । १२ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाले दुःख दिएपछि लगातार दुईपटक डायलासिस गरेका प्रधानमन्त्री तँग्रिसक्नुभएको छैन । तर पहिलेभन्दा बढी काममा व्यस्त देखिनुहुन्छ । अघिल्लो हप्ता मात्रै उहाँले तीनवटा चर्चित र महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो । पहिलो सबै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयाँ […]
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार ०९:३९
कानुनी रूपमै बलात्कार एक निकृष्ट र जघन्य अपराध हो । समाजमा यस्ता घटना अहिले पनि दिनानुदिन बढिरहेकै छन् । आफ्नै बाबु, दाजुभाइ, काका, साथीभाइ, नजिकका आफन्त, छरछिमेकबाटै बालिकाहरु तथा महिलाहरु बलात्कृत भइरहेका छन् । यसले समाज दिनदिनै झन् असभ्य बन्दै गएको छ । महिला हिंसाभित्रको सबैभन्दा कारुणिक अवस्था हो बालिका बलात्कार । यस्ता घटनाले समाजमा […]
२५ मंसिर २०७६, बुधबार १३:०७
मृत्युदण्ड बलात्कारीका लागि सही सजाय होइन
पछिल्लो समय यौनहिंसा, बलात्कार र महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना धेरै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । बलात्कारका घटना बाहिर आउन थालेसँगै समाजमा ‘बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने’ माग पनि बढ्ने गर्छ । सर्वसाधरण मात्र होइन, जिम्मेवार पदमा रहेका र नेताहरु समेतले यस्तो माग उठाएको सुनिन्छ । तर के साँच्चै मृत्युदण्डले बलात्कार घटनाको समाधान दिन्छ त ? नारीवादी शिक्षाविद् र […]
२५ मंसिर २०७६, बुधबार १२:४६